EspritBoom – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike – Gam akporo Ndị aghụghọ Atụmatụ
EspritBoom bụ egwuregwu ịkọ nkọ mgbaghoju anya ọhụrụ. Ọ ga-eju gị anya na mgbagha pụrụ iche nke na-edozi rebus ọ bụla. Ọ bụrụ na ị maara ihe ma ṅaa ntị na nkọwa, ị ga-enwe oge izu ike ma na-atọ ụtọ idozi mgbagwoju anya., Ị ga-azụ ụbụrụ gị iji dozie mgbagwoju anya mgbagwoju anya site iche iche iche echiche. Mkpụrụ ego dị oké mkpa na egwuregwu., enwere ike iji ha zụta ndụmọdụ ndụmọdụ bara uru.
Otu esi egwu egwu:
• Gụọ ilu ilu ahụ ma chepụta azịza ya.
• Tinye akwụkwọ ozi na ngọngọ n'usoro dị mma ma dee okwu ndị zoro ezo.
• Na mmalite, ndị a bụ egwuregwu mgbagwoju anya, ma ihe isi ike ga-abawanye ka ọkwa na-abawanye.
• 4 ụdị aghụghọ aghụghọ ga-enyere gị aka dozie mgbagwoju anya mgbagwoju anya: kpochapụ mkpụrụedemede niile na-ejighị n'aka na ngọngọ, gosi mkpụrụedemede enweghị usoro, gosi mkpụrụedemede nke otu ngọngọ,ma gosipụta ma ọ dịkarịa ala 3 leta.
• Ịzụta hint hints na-efu mkpụrụ ego ma ị nwere ike nweta ụgwọ ọrụ kwekọrọ na mkpụrụ ego oge ọ bụla ị gafere ọkwa.
★ Dị mfe igwu egwu na nwere ike ịchịkwa na otu aka
★ oke ọkwa na-eche ka ị na-egwu.
★ Ọ dịghị netwọk chọrọ : nwee anụrị na ụwa nke ilu ilu na mgbagwoju anya!
★ N'ọnọdụ rapaara, ị nwere ike iji mkpụrụ ego zụta akara ka ịchọta azịza ya.
★ The ọzọ ị ga-esi na-emecha etoju, ndị ọzọ siri ike na-akpali!
★ ọkwa okwu siri ike, na-akpali akpali na-akpali.
★ Nweta ọhụrụ free clues kwa ụbọchị na-edozi mgbagwoju anya na azịza.
Ọ bụrụkwa na ị bụ onye nwere nkọwa, onye na-eche echiche nke ọma ma na-enwe mmasị idozi mgbagwoju anya, yabụ ana m akwado gị ka gị na ndị enyi gị kpọọ EspritBoom ọnụ wee nwee amamihe karịa onye ọ bụla ọzọ !
EspritBoom bụ egwuregwu ịkọ nkọ mgbaghoju anya ọhụrụ. Ọ ga-eju gị anya na mgbagha pụrụ iche nke idozi nke ọ bụla rebus. Ọ bụrụ na ị maara ihe ma ṅaa ntị na nkọwa., ị ga-enwe oge izu ike ma na-atọ ụtọ idozi mgbagwoju anya. N'ezie, ị ga-azụ ụbụrụ gị iji dozie mgbagwoju anya mgbagwoju anya site na iche echiche dị iche iche. Mkpụrụ ego ga-enwerịrị n'egwuregwu ahụ, enwere ike iji ha zụta akara ngosi bara uru.
Otu esi egwu:
• Tinye mkpụrụedemede na ngọngọ n'usoro ziri ezi wee sụpee okwu zoro ezo.
• Na mbụ ndị a bụ egwuregwu mgbagwoju anya, ma ihe isi ike ga-abawanye ka ọkwa na-abawanye.
• 4 ụdị aghụghọ aghụghọ ga-enyere gị aka dozie mgbagwoju anya mgbagwoju anya: kpochapụ mkpụrụedemede niile na-ejighị n'aka na ngọngọ, gosi mkpụrụedemede enweghị usoro, gosi mkpụrụedemede sitere na otu ngọngọ, ma gosipụta ma ọ dịkarịa ala 3 leta.
• Ịzụta ihe ngosi na-efu mkpụrụ ego ma ị nwere ike nweta ụgwọ ọrụ kwekọrọ na mkpụrụ ego oge ọ bụla mgbe ị gafere ọkwa..
★ Ọ dịghị netwọk chọrọ: nwee anụrị na ụwa nke ilu ilu na mgbagwoju anya!
★ N'ọnọdụ rapaara, ị nwere ike iji mkpụrụ ego zụta ihe ngosi iji chọta azịza ya.
★ Ka ị na-enweta na ọkwa ikpeazụ, ihe siri ike ma na-adọrọ mmasị karị!
★ siri ike, ọkwa okwu siri ike ma na-atọ ụtọ.
Ọ bụrụ na ị bụkwa onye na-eleba anya na nkọwa, na-eche nke ọma ma na-enwe mmasị idozi mgbagwoju anya, Mgbe ahụ, a na m akwado gị ka gị na ndị enyi gị na-egwu EspritBoom ma nwee amamihe karịa onye ọ bụla ọzọ!
Atiya: Ndị aghụghọ na mbanye anataghị ikike ma ọ bụ Atụmatụ Mkpado: CheatsHack, EspritBoom
← Ejiji Princess – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike Agha Epic: Ocheeze – Ndị aghụghọ&Mbanye anataghị ikike →